Kuyini Ngempela? - Mytika Speak
Ikhaya / Okwangempela / Kuyini Ngempela?
I-True Self ingunembeza wakho ngaphandle kwe-Ego yakho.
Njengomuntu, unengqondo ethola ukuqonda okuvela ebuchosheni bakho nemizwa evela emphefumulweni wakho. Ingqondo ihlunga zombili izinhlobo zolwazi futhi umphumela kuba unembeza wakho.
Njengengane, ingqondo ngokuvamile ivumela imizwa ukuthi ibambe iqhaza elibonakalayo emqondweni wakho owaziyo futhi ngenxa yalokho iholelwa ngumphefumulo wakho. Njengoba udlula kokuhlangenwe nakho okuhlukahlukene empilweni, i- ukuzazisa iqala ukuthuthukisa eyakho uhlamvu. Cabanga ngomlingiswa wakho njengeqhaza olibambayo ukuvikela umphefumulo wakho ekulimaleni kwabanye noma ekungeneni emphakathini.
Isibonelo, uJim omncane ugijimela eqenjini lezingane futhi ufuna ukuba abangane. Izingane ziyamhleka futhi zihlekise ngejakhethi yakhe ayithandayo ngoba inomklamo womdlwane kuyo. Njengoba ehlekwa usulu, ngezinyembezi ezithukuthele, u-Jim's Ego ungenela ukuvikela umphefumulo wakhe ekulimaleni ngokuthatha isinqumo sokuthi imiklamo ye-puppy iyisiphukuphuku. Ukuqhubekela phambili, uJim ubengacabanga ukuthi uphikisana nalo mklamo kungakhathalekile ukuthi uzizwa kanjani ngempela ngawo. Eqinisweni, kunethuba elihle lokuthi uJim angahlekisa ngezinye izingane ezigqoka umklamo ofanayo. UJim manje usezozichaza kakhulu ngesimilo sakhe kunokuba azichaze ngoQobo Lwakhe.
I-True Self yingxenye yakho efihlwe ngaphakathi komlingiswa wakho. Kungumuzwa futhi kwesinye isikhathi ngisho nezwi esilizwayo lapho sidinga ukuholwa. Kungukuthi singobani ngaphandle kongqimba oluvikelayo lwe-Ego.
Ukuhlanganiswa kwe-True Self kanye nomlingiswa yikhona okuchaza umuntu.
I-ember engenandaba edala umlilo,
ihlathi elethukile elihlukunyezwa amalangabi,
umoya ovunguzayo owendlayo,
imvula enesiphepho eyixosha?
Ifu elinethezekile elihlobisa isibhakabhaka,
isigxobo esikhanyayo ngosuku lwamafu,
uthingo olubonisiwe lubonakala ngokugcwele,
ukumamatheka okukhulu ebusweni obunethemba?
Okuhle nokubi ozizwa ngaphakathi,
amathemba akho nokwesaba kwakho emva kokufa,
amaqiniso owaziyo futhi uzama ukuwafihla,
induduzo engayizwa lapho ngihlala?
Izwi olizwayo lihleba okulungile,
osula izinyembezi zakho ebusuku,
Umhlahlandlela okuyisa lapho konke kukhanya khona,
noma lowo ongaboni lutho?
Izinkanyezi ezicwazimulayo lapho konke kulungile,
ukukhanya kwenyanga kubangela bonke ubumnyama buzulazule,
ilanga elikhanyisa izinsuku zakho,
Isiqu Sangempela ungazizwa futhi ungalokothi usule.
Amathegiukuvusa ukuqonda ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya Okwangempela uyini uqobo lweqiniso
Kuvuswe NguHadi uthi:
Novemba 30, 2020 ku-12: 18 pm
Ingabe wonke umuntu Unesiqu Sangempela?
Ukulinganisela kwamandla kuthinta kanjani ukuphola?